LG's Apartment-Indawo yokupaka yangaphakathi kunye nentsha yasimahla
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLidija
Indawo yam isondele kumbindi wedolophu, ngaphakathi kwe-20 min ukuhamba okanye i-5 min ngemoto, i-2.2 km ukuya kwi-Square, i-1,2 km ukuya e-Capitol Mall kunye ne-10-15 min ukuhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe / isikhululo sebhasi. Ngaphakathi kwesakhiwo kukho iivenkile ezinkulu ezininzi, iivenkile zekofu kunye neendawo zokutyela ezintle. Kukho ikhemesti, indawo yokubhaka kunye nevenkile enkulu nje eyi-2min kude nefulethi kwaye kukho nesikhululo sebhasi apho unokukhwela ibhasi ukuya eCentar.
Le ndlu i-45m2 ibekwe kwindawo ezolileyo. Kukho iibhedi ezimbini zomntu omnye kwigumbi lokulala, i-sofa ekhululekile (inokusetyenziswa njengebhedi), igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela kunye neendawo zokupaka simahla ngaphakathi kwesakhiwo.
Unayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile (iTV, i-WI-FI, i-air conditioning, ukufudumeza okuphakathi) .
Indawo entle eneebhari ezininzi kunye neendawo zokutyela zasekhaya. Indawo ecocekileyo, ethandekayo kwaye ezolileyo. Indawo yokupaka yasimahla phantsi kwesakhiwo nasemva kwesakhiwo.
4.93 · Izimvo eziyi-89
Indawo entle eneebhari ezininzi kunye neendawo zokutyela zasekhaya. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yendawo, i-ambiance, indawo yokuhlala, indawo yangaphandle, kunye nabantu.Indawo yam ilungile kwizibini, abantu abahambahambayo, abahambi ngezoshishino, kunye neentsapho (kunye nabantwana).
Iyafumaneka kwiindwendwe zam ngalo lonke ixesha.